तेजाब छ्यापिँदा देशकै अनुहार कुरूप देखेर अभियान थालेँ
गजेन्द्र बाेहरा काठमाडौं - शुक्रबार, भदौ २६, २०७७
तेजाब आक्रमण विरुद्धका अभियानमा अविछिन्न जोडिएको एउटा नाम हो- उज्ज्वलविक्रम थापा। न उनको कुनै संघ छ, न कुनै संस्था
यो अभियानका उनी एक्ला अभियन्ता हुन्। ६ वर्षअघि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूलाई उनले आफ्नै सन्तानजसरी स्याहार्न थाले।
उनीहरूको उपचारदेखि पुनर्स्थापनासम्मका काममा एक्लै खटिए। ६ वर्षअघि समाजसेवाको यो बाटोमा मोडिएका थापाले तेजाब आक्रमणमा परेका १३ जनालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरिहेका छन्।
अहिलेसम्म नेपालमा १७ वटा यस्ता घटना भइसकेका छन् र १९ जना तेजाब आक्रमणमा परेका छन्।
न कुनै भीड जम्मा गरेर उनी माइतीघर मण्डल पुगे, न कहिल्यै चर्का भाषण गरे। यहाँसम्म कि उनले सरकारसँग पैसा पनि मागेनन्।
उनले सधैं एउटामात्रै चिज मागे- तेजाब आक्रमणकारीलाई सजाय दिनका लागि कडा कानुन। र, अन्ततः बिहीबार उनको यो अभियान सफलताको एउटा बिन्द‌ुमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नका लागि १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएका छन्। यिनै सन्दर्भमा रहेर समाजसेवी थापासँग आयोमेलका गजेन्द्र बोहराले गरेको कुराकानी:
तपाईंको अभियान सफलताको एउटा बिन्दुमा पुग्दै गर्दा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ?
जुन तेजाबविरुद्धको अभियान थियो, अब यसलाई सरकारले नोटिस गर्‌यो। मैले चाहिँ त्यो रूपमा हेर्छु। किनभने यति हाइ डेलिगेसनका व्यक्तिहरूसँग, पीडितहरूसँग छलफल भएर कतिपय बुँदामा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं घोषणा गरिसक्नुभएको छ। कतिपय डिसिजन क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आउन बाँकी नै छन्। एउटा चिज के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत त्यो हलभित्र भएका सबैजनाले तेजाब आक्रमण एउटा क्रुर आक्रमण हो, अपराध हो, यसको दण्ड पुगेन, यसको बिक्री–वितरणका मापदण्ड, कानुनहरू पुगेनन् भन्ने कुरा स्विकार्नुभो। पीडितहरूको स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षाका चिजहरूमा कमी-कमजोरी भएको छ भनेर उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। यसका संघर्षहरू अझै केही दिन चल्न सक्छन्। तर, एकदमै सकारात्मक सुरुवात हो।
के यो अभियानको पूर्णसफलता हो?
पूरै सफलता भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ, अब जुन दिनदेखि यो कानुन पूर्णरूपमा लागू हुन्छ, त्यो दिनदेखि अब आइन्दा हुने अपराधलाई यो कानुन लागू हुन्छ। हाम्रो अहिले पनि संकोच र शंका कहाँ छ भने पुराना जति पनि मुद्दा पेन्डिङ छन्, ती मद्दाको कामकारबाही कसरी अगाडि बढ्छ? कोभिडका नाममा हामीले कतिपय अपराधीलाई बाहिर छोडेका छौं, उनीहरू पुनः जेल चलान हुन्छन् कि हुँदैनन्? यो सबै चिज नहेरिकन अहिले नै टिकाटिप्पणी गर्न अलि चाँडै हुन्छ कि!
समाजसेवाका थुप्रै बाटा थिए त, ‘जलेका अनुहार’ नै किन रोज्नुभयो?
हेर्नुस् एउटा कुरा के हो भने, पहिलोचोटि जब संगीता मगरको केस टेकओभर गरेँ, मलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा भयो। त्यो के भने हाम्रो समाजमा, नेपालीमा मानवता भन्ने चिज रहेछ किनभने अनेकौं व्यक्तिले आएर अस्पतालमा पैसा दिए। कोही फलफूल लिएर आए, कोही के लिएर आए। मानवीय सोच भएको हाम्रो देशमा यो अमानवीय अपराधको आवाज नेपाली जनताले अवश्य पनि बुलन्द गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास थियो। जति पनि तेजाब आक्रमण भोगेका भाइबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचारका लागि नेपाल सरकारको भूमिका एकदमै कम थियो। नेपाली जनताले दुःखसुखले कमाएको पैसा उहाँहरूलाई दान दिएर उहाँहरूको उपचार भएको छ। तर, आज सरकार जुन मोडमा पुगेको छ, त्यो के भन्दाखेरि यो जनआक्रोश, जनचासोको प्रतिफल हो।
जुन यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई मेरो जीवनमा देखेको एउटा अमानवीय दृश्यहरूमा तेजाबले जलेका अनुहारहरू थिए। र, सदा रहन्छ। र, यो अभियानका लागि नेपाली जनताले पनि सही ठाने। जति पनि मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा यस्ता घटना आए, सारा नेपाली जनताले यसको क्रुरता, अमानवियता देखे। र, आज सरकारको कदम जुन छ, त्यो सकारात्मक छ। यसको श्रेय सारा नेपाली जनताको चासो र आक्रोशले ल्याएको हो भन्ने ठान्छु। र, यसले के प्रमाणित गरेको छ भने यस्तो अमानवीय अपराध हुने हाम्रो देशमा मानवियता पनि छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।
यो अभियान सुरु गर्दै गर्दा तपाईंलाई लागेको थियो, कि एकदिन सरकारले यसरी कानुन नै बनाउला?
लाग्नु र नलाग्नु भन्ने पनि यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ र अनरसिप लिनैपर्छ भन्ने अभियानमा म थिएँ। ६ वर्षअघिको जुन सामाजिक अभियान मैले थालेँ, चाहे त्यो मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको होस् या कुनै मिडियामा बोलेको कुरा होस्, त्यो बेलादेखि नै मैले के भन्दै आएको छु भने यदि अपराधी अमानवीय हो भने, त्यो देखेर पनि आँखा चिम्लेर बस्ने सरकार त्योभन्दा पनि झन् अमानवीय हो। सरकारले यस्ता चेलीहरूको, बाबुहरूको रोइकराइ नसुन्नु भनेको अत्याचार हो भन्ने मैले बोलेको थिएँ। हिजोको दृश्य त्यो हलभित्र, पीडित, प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत त्यहाँ आउनुभएका विशिष्ट महानुभावहरूमा मैले त्यो मानवता देखेँ। अनि मैले बाहिर निस्किएपछि मैले के लेखेको छु भने ‘मानवताको जित भो, अपराधको हार भो।’ यो केवल नियम, या एउटा कानुन बन्ने कुरामात्रै होइन, यो देशमा मानवता छ र, सरकारमा बस्नेहरूमा पनि मानवता छ भन्ने कुरा यसले स्थापित गरेको छ।
यस्ता अपराधमा दण्ड सजायका लागि कस्ता कानुनी अभ्यास छन् अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा?
यस्तो हेर्नुस्, सबैको आ-आफ्नो छ, मुस्लिम देशहरूमा उनीहरूको सरियत कानुन छ, त्यो बेग्लै पाटो छ। हाम्रो छिमेकी भारतमा भने कम्तिमा १० वर्ष छ, वा आजीवन काराबासको सजाय छ। मैले हिजो पनि त्यो हलभित्र, मेरो बहस एउटा ठाउँमा के छ भने तेजाब आक्रमणलाई सारा विश्वले एउटा शारीरिक आक्रमणको रूपमा पहिला हेर्छ। म त्यसमा डिफर गर्छु। किनकि, नेपालमा अहिले कानुन हे¥यो भने शारीरिक चोटका लागि नेपालमा अहिले तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजाय तोकिएको छ। मैले सधैं के भनेको छु भने शारीरिक चोटका लागि तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म त्यो ठीक छ। अब कुरा गरौं, सामाजिक चोट। अब कुरा गरौं, उसको आइडेन्टिटीको चोट, उसको जीवनको चोट। अब यी सबै चोटहरूको हिसाब गरेर कति थप्दै जाने? त्यही हुनाले यदि यो देशमा हामीले तेजाब आक्रमणलाई न्यूनस्तरमा पुर्‌याउने हो भने जन्मकैदको विकल्प हुँदैन भनेर चिच्याएको ६ वर्ष भो। किनभने मेरो विचारमा यो अपराध रोक्न सक्ने हाम्रो देश, हाम्रो समाज हेर्दा कानुनको जुन दण्ड छ, त्यो सुनेर अपराधी कामेर अपराधीले तेजाब छ्याप्न बन्द गर्नुपर्छ, होइन भने यो रोकिँदैन।
समाजमा किन यस्ता अपराध हुन्छन्, तपाईंलाई हाम्रो समाजको मनोविज्ञान कता जाँदैछ जस्तो लाग्छ?
अहिले काठमाडौंकै मानिसका कुरा गर्‌यौं भने ग्रामीण भेगबाट, अरू जिल्लाबाट आएर धेरै मानिस काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ। हामी जुन हुर्काइबाट आयौं, हामीले हाम्रा हजुरबुबाले हजुरआमालाई हेपेको देखेको, हाम्रा बुबाले हाम्रा आमालाई हेपेको देखेको, हामी त्यो हुर्काइ वा त्यो पृष्ठभूमिबाट हुर्किंदै आयौं। आज जब यहाँ सहरमा आउनुहुन्छ। युवापुस्ता, चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष, उहाँहरू स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहनुहुन्छ। त्यही हुनाले जब यो सोचको, यो पुस्ताको किनभने त्यो बेला आमाहरू चुप लागेर बसेको जस्तो अहिलेका चेली चुप लागेर बस्दैनन्। त्यो सायद मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, हामीले छोरा मान्छे हुर्काएको संस्कार भएन।
हामीले त्यो पुस्ताको सोच परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं। र, जबसम्म पुरुषमा हुन त महिलाले पनि तेजाब आक्रमण गरेका छन्। हामीले सम्बन्ध सस्तो बनायौं। साइबर संसारमा बाँचेर हामीले त्यसलाई वास्तविकता ठानेका छौं। जीवन सधैं कष्टकर छ, जीवन एउटा सधै संघर्षशील यात्रा हो। यसलाई हल्काफुल्का लिने गल्ती यो पुस्ताले नगरोस्। साइबर वर्ल्ड भनेको रियल वल्र्ड होइन, आफ्नो यथार्थमा बाँच्न सिक्नुपर्छ। आफूले पुरुष हो भने महिलालाई, महिला हो भने पुरुषलाई समान व्यवहार गर्ने आत्माबाट स्वीकार्न सक्नुपर्‌यो अनिमात्रै यस्ता अपराध बन्द हुन्छन्।
तपाईं त राजनीति पनि गर्ने मान्छे। राजनीति र समाजसेवा के हो जस्तो लाग्छ?
हेर्नुस् राजनीतिका कुरा गर्नुहुन्छ भने त राजनीतिको मेरो व्याख्या सेवा नै हो। राजनीति पेसा बनाइयो यो देशमा किनभने पासपोर्ट बनाउँदा प्रोफेसनको ठाउँमा पोलिटिक्स लेखिन्छ, यो सरासर गलत हो। ‘पोलिटिक्स क्यान नट बिकम करिअर’, यो इम्प्लोयमेन्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि, जबसम्म हामीले युवामाझ भएको आवाज, जस्तो अहिले छ ‘इनफ इज इनफ’। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, कति चाहिँ अति हो? भन्थेँ पहिलादेखि नै। किनभने एउटा सबैको आफ्नो सोच, आ–आफ्नो प्यासनको क्षमता हुन्छ। त्यसपछि त्यो उम्लिन्छ। अहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेपालको युवा फ्रस्ट्रेटेड छ। सहरकै युवाको हालत यो छ भने दुर्गमको युवा कति फ्रस्टेटेड होला? हामी एउटा गल्ती के गर्दैछौँ भने, नेपाल भनेको काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज वा धनगढीमात्रै ठान्छौं, त्यो होइन। नेपालको भूभाग भनेको दुर्गम गाउँ पनि हो, जहाँ धेरै युवा बस्नुहुन्छ। उहाँहरू धेरै फ्रस्टेटेड हुनुहुन्छ। उहाँहरू फ्रस्टेटेड हुनुहुन्छ।
त्यही भएर पोलिटिकली जुन मुद्दा हामीले उठाउनुपर्ने हो, चाहे त्यो तेजाब होस्, चाहे त्यो मानवअधिकारका कुरा होउन्, वा छुवाछुतका मुद्दा होउन्। हामीले यसलाई भोटको समयमा मात्रै प्रयोग गरिहरको छौं। तर, जबसम्म सोसल जस्टिस हुँदैन, पोलिटिक्स सक्सेस हुँदैन। त्यसैले पोलिटिकल इस्युज यी हुन्। तर, हामी सजिलो पोलिटिकल इस्यु उठाउँछौं। यदि यो देशमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो भने राणाकालदेखि अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि त्यही गोरेटो बाटो, त्यही खानेपानी, त्यही कालो पाइप, त्यही बिजुलीको खम्बा र पोलहरू। हामीले त्यसैलाई मात्रै पोलिटिक्स ठान्यौं। तर, भौतिक विकास र आधारभूत आवश्यकता पुर्‌याउनेमात्रै पोलिटिक्स हुन सक्दैन।
विश्वमा मृत्युदण्डकै कानुन भएका देश पनि छन्। कानुनमात्रै परिवर्तन गरेर यस्ता अपराध रोकिएलान्?
यो सही कुरा हो। जस्तो कि छाउपडी प्रथा, यसलाई पनि अपराधै मानेर सरकारले कानुन बनायो। छाउपडी प्रथा खोज्न किन हामी सुदूरपश्चिमै जानुपर्ने? हामी जहाँ बसेका छौं, चार घरपरिवारका चेलीलाई सोधौं, यहाँहरूलाई महिनावारी हुँदा घरभान्सामा रोकिन्छ कि रोकिँदैन? मन्दिर जाँदा बुबाले नजाउ भन्नुहुन्छ कि? हामीले त्यो सोच परिवर्तन गर्ने हो। हामीले एउटा गल्ती कहाँ गरिरहेका छौं भने, यो मैले तेजाबमा पनि अनुभव गरेको छु, निम्न वर्गमा यस्ता अपराध हुँदोरहेछ, होइन। यो हामी मान्छेले गर्ने अपराध हो। छाउपडी प्रथा सुदूरपश्चिमाञ्चलमा होइन, दरबारमार्गको वरिपरि छ, त्यो सम्बोधन गरौं न। त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन, सुदूरपश्चिमलाई टार्गेट गरेर हामीले पब्लिसिटीमात्रै खोजेका हौं। किनभने, काठमाडौंमा हेर्नुस्, जीवनशैली र परम्पराका नाममा सामाजिक परिवर्तन हुन समय लाग्छ। जस्तो कि, पहिलो तेजाब आक्रमण भएको लगभग ६ वर्ष भो। हरेक दिन निरन्तर काम गर्दाखेरि सरकारले कुरा सुन्यो। त्यसमा पक्षपात हुनुभएन, निष्पक्ष हुनुप¥यो। र, प्रष्ट हुनुपर्‌यो। हरेक सामाजिक मुद्दा खोज्न हामी कि, दुर्गम वा सुदूरलाई मात्रै टार्गेट गर्छौं? किनभने हामीलाई बोल्न सजिलो हुन्छ। हामी यहीँ खोजौं न, मलाई त लाग्छ, कतिपय नेतागणकै घरमा छाउपडी छ। किनभने, हामीले त्यो निम्नस्तरबाट होइन, आफ्नै मन र मस्तिष्कबाट यस्ता सोच हटाउनुपर्छ।
त्यसैले छाउपडी हटाउने हो भने, हामीले यही काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट हटाउनुपर्छ। हामी पहिला दुर्गममा गएर सहर आउन खोज्यौं भने त्यो हाम्रो गल्ती हुन्छ, हाम्रो टार्गेट ग्रुप गलत हुन्छ। उद्देश्य गलत हो। त्यही भएर हेर्नुस् जब कानुन बन्ने कुरा आउँछ, जस्तो कि तेजाब आक्रमणकै कुरा गरौं, यो कानुनमा हुनुपर्ने फोकस भनेको बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण र त्यसलाई कसरी कडा बनाउने? किनभने जब अपराध हुन्छ, त्यपछिको उपचारको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर, प्राथमिकता कहाँ हुनुपर्‌यो भने, त्यसलाई कसरी अपराधीको हातमा पुग्न नदिने? जस्तो कि जनचेतना, बाथरुम सफा गर्नलाई एसिड, कृपया बाथरुम सफा गर्नलाई एसिड प्रयोग नगर्नुस्, एसिडले बाथरुम सफा हुँदैन, पाइप पग्लिन्छ।
अर्काे, ब्याट्रीमा युज हुने, सुनचाँदीका गहना बनाउँदा युज गर्ने कुरा छ, नियोन कलरको बोतल बनाऔं। आज बियरका बोतलमा, पानीका बोतलमा एसिड पाइन्छ कसले दियो यस्तो अनुमति? कहिलेकाहीँ मानिस आफैं झुक्किएर पनि खानसक्छ। किनभने, मलाई हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमा सबैभन्दा मन परेको पक्ष के हो भने उहाँले आयातदेखि यहाँ जसले एसिडको उत्पादन गर्छ, त्यो बेचबिखनदेखि लिएर त्यसको रिटेलसम्म पूर्णरूपमा निषेधका कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा। र यसले अपराध घटाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कानुनले अपराध घट्छ कि घट्दैन भन्ने कुरा छ, अपराधीले पनि कानुन हेर्छ। मैले के देखेको छु भने, कानुन बनाएरमात्रै हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयन र अझ भनौं सञ्चारमाध्यमबाट अब तेजाब छ्यापेको खण्डमा यो-यो सजाय छ है भनेर त्रास फैलाउने काम पनि गर्नुपर्छ। यसले अवश्य पनि अपराध घट्छ।
धेरै मानिसले मलाई शुभकामना दिए, बधाइ दिइरहेका छन्। तर, यो हामी सबै नेपालीको जित हो। चाहे त्यो मिडियाकर्मी होलान्, चाहे त्यो विद्यार्थी जसले कलेजकै युनिफर्ममा हाम्रो अभियानमा सहभागी हुनुभयो। त्यो हरेक नेपाली जसले केही फलफूल र २० रुपैयाँ लिएर भए पनि अस्पताल पुग्नुभयो। यो हामी सबैको जित हो। तेजाब आक्रमणको अपराधले विश्वसामु एउटा राज्यको तस्बिरै कलंकित बनाउँछ। र, हिजो जुन निर्णय नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ, यो विश्वका अगाडि एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो। कि हामीकहाँ तेजाब आक्रमणजस्तो जघन्य, अमानवीय र क्रुर अपराधको ठाउँ छैन र यो अपराध गर्नेलाई हामी कडाभन्दा कडा सजाय दिन्छौं भन्ने जुन तस्बिर नेपालको आयो त्यो हामी सबै नेपालीको जित हो र, यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ।
तेजाब आक्रमणकारीलाई कारबाही गर्न १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
तेजाब आक्रमणमा परेकाहरुसँग समाजिक अभियन्ता उज्ज्वलबिक्रम थापा